Rayson | amamodeli e-spring air umatilasi
Ngokuthembela kubuchwepheshe obuthuthukisiwe, amakhono amahle kakhulu okukhiqiza, kanye nenkonzo ephelele, uRayson uyahola embonini manje futhi usabalalisa iRayson yethu emhlabeni wonke. Kanye nemikhiqizo yethu, izinsiza zethu nazo zihlinzekwa ukuze zibe sezingeni eliphezulu. amamodeli kamatilasi womoya wasentwasahlobo Sinabasebenzi abangochwepheshe abanolwazi lweminyaka embonini. Yizona ezihlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphezulu kumakhasimende emhlabeni wonke. Uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana nomkhiqizo wethu omusha wamamodeli kamatilasi womoya wasentwasahlobo noma ufuna ukwazi okwengeziwe ngenkampani yethu, zizwe ukhululekile ukusithinta. Ochwepheshe bethu bangathanda ukukusiza noma nini.U-Rayson uhamba ochungechungeni lwezinqubo ezilandelanayo. Lezi zinqubo zihlanganisa ukubeka indwangu, ukumaka, ukusika, ukuthunga, ukuhlola, ukuqeda, nokucindezela.